South Africa iyo koobabkii ugu dambeeyay ee Africa - BBC Somali - Cayaaraha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 1 December, 2012, 21:29 GMT 00:29 SGA
Si aan la mid ahayn martigalinta koobka adduunka, oo Koonfur Africa ay muddo lix sano ah sii qorshaynaysay, ayaa abaabulka koobka Qaramada Africa wuxuu ahaa mid ka deg deg badan. Libya ayaa lagu wada in ay martigaliso tartanka sanadka 2013, balse dagaalka sokeeye ee dalkaaas ka dhacay ee keenay in la dilo Muammar Gaddafi, ayaa keenay in qorshahaas loo weeciyo dalka Koonfur Africa, oo markii hore loo xushay in lagu qabto tartanka sanadka 2017.
Abaabulayaashu,waxay leeyihiin wax dhibaato ah ma leh. waan ku kalsoon nahay qorshayaasha la diyaariyay, faahfaahainta markay noqoto iyo fulintoodaba, ayuu yiri sarkaalka madaxa ka ah guddiga fulinta Mvuzo Mbebe. Waan ognahay in ay dhaleecayn badan jirtay in dadku aysan magaalooyin kala duwan ku arkin xayaysiinta cayaaraha, ayuu qirtay, isagoo ballanqaaday in goor dhow la kordhin doono muujinta tartanka.
Dowladda ayaa ugu talo gashay ilaa 452 million oo lacagta rand ah 32 million oo gini in ay ku baxdo tartanka qabashadiisa, oo 83 million oo rand ilaa 5.8 million oo gini loogu talogalay guddiga abaabulka. Inta soo hartay waxay ku baxaysa qurxinta magaalooyinka cayaaruhu ka dhacayaa iyo waaxaha qaranka siyaabo la xiriira qarashka tas-hiilaadka.
Iyadoo koobka adduunka uu celcelis ahaa cayaartiiba ay daawanayeen ilaa 49 kun oo dadwayne, oo 93% tigidhadii cayaaraha la iibsaday, ayaa buuxinta garoomada ay ka dhacayaa cayaaraha koobka Africa ay muuqataa taariikhiyan in uu ka dhib badan yahay. Sanadkan horaantiisii, Equatorial Guinea, ilaa laba boqol oo taageerayaal ah oo kaliya ayaa joogay wareeggii labaad ee cayaartii magaalada Bata ku dhexmartay Zambia iyo Sudan.
Guddiga abaabulka cayaaraha 2013 ayaa iibinta tigidhada ka dhigay muhiimadooda koowaad, iyadoo wareeggii ugu horeeyay ee ololahooda waxay iibiyeen ilaa labaatan kun oo tigidh, taasoo ah laba jibaar intii ay horay u qorsheeyeen.
Dadwaynaha Koonfur Africa ayaa taas caawiyay...xiriirka kubadda cagta Itoobiya ayaa codsaday ilaa 15 kun oo tigidh si ay taageerayaashooda ugu helaan tigidho, maadaama ay markii ugu horaysay muddo 30 sano ah soo xaadiraan cayaaraha koobka qaaradda Africa. Zambia ayaa la filayaa in ay iibiso ilaa toban kun oo tigidh oo ay gataan taageerayaasha kooxda.
Madaxwayne Zuma ayaa sheegay in martigalinta koobta ay noqon doonto mid muujisa wixii laga dhaxlay koobkii adduunka ee 2010 Fifa, oo aan si guul leh u martigalinay iyadoo aan taageero ka helaynay qaaradda. Wadan kala bar dadku ay ku nool yihiin meel ka hoosaysa qadka saboolnimada, ayaa sicirka tigidhadu uu yahay mid macquul ah, taageerayaasha ayaa awoodda in ay laba cayaarood ku daawadaan ilaa 45 rad oo u dhiganta shan doolar – tan iyo sanadkii 1978, cayaaraha wareegga koowaad ee group-yada ayaa lagu cayaarayay laba cayaaroodba hal garoon.
Tartan telefishinka laga sii daynayay ilaa bartamihii sideetameeyadii, ayaa koriimadiisu ay tahay mid xoog leh. Guddiga kubadda cagta xiriirada Africa, ayaa sheegay in isu gaynta 32 kulan oo dhacay sanadka 2012 ay daawadeen ilaa 6.6 billion oo dadwayne, taasoo 87,072 saacadood ay telefishinadu sii daynayeen.